गुगललाई पछ्याउँदै भेटिएको नेपाली रेष्टुरा – रामचन्द्र भट्ट | himalayakhabar.com
गुगललाई पछ्याउँदै भेटिएको नेपाली रेष्टुरा – रामचन्द्र भट्ट
660 पटक पढिएको
– रामचन्द्र भट्ट
2nd Jan 2019, Wednesday | २०७५ पुष १८, बुधवार ०९:४४
‘ल, यो पनि टेक्ससकै रहेछ,’ देब्रे साइडबाट ओभरटेक गरेर अघि बढेका गाडीहरुलाई छोरा आरोग्यले गिन्ती गरिरहेको छ । ७० माइल प्रतिघण्टाको स्पिड लिमिटको हाइवे–टेन बाट हामी पूर्वतिर अघि बढिरहेका छौँ ।
हाम्रो गाडीलाई आरोग्यले अटोक्रुजमा लगाएको छ । ७० माइलको स्पिडमा अटोक्रुज लगाएकोले गाडी त्यही स्पिडमा तलमाथि नगरि कुदिरहेको छ । राडारले हाम्रै लेनमा केही अघि गाडी देख्यो भने स्पिड आफसे आफ कम गरिदिन्थ्यो । अगाडीको गाडीले ब्रेक लगाएर ब्रेक लाइट बल्यो भने हाम्रो गाडी पनि आफसे आफ ब्रेक लाग्थ्यो । अगाडीकोले स्पिड बढाएसँगै हाम्रो पनि स्वचालित रुपमा स्पिड बढ्थ्यो । तर ७० कै लिमिटमा ।
आधा घण्टा अघिमात्र हामीले अलाबामालाई बाइबाइ गरेर फ्लोरिडा राज्य प्रवेश गरेका थियौं । हाम्रो आजको गन्तव्य ओरल्याण्डो छ । साँझ ७ बजेसम्म ओरल्याण्डो पुग्ने लक्ष्यसाथ बिहान ९ बजेनै हाम्रो यात्रा मोबिलबाट सुरु भएको हो ।
टेक्ससको युलेसबाट हिजो बिहान ९ बजे हाम्रो यात्रा थालनी भएको हो । ६ सय ५ माइल यात्रा गरेपछि हिजोको यात्राले मोबिलमा आएर विश्राम लिएको थियो । एक साता अघिनै अनलाइनबाट मोबिलको स्प्रिङहिल मेरिअट होटलमा कोठा बुक गरिसकेको थिएँ ।
‘बास बस्ने होटलमा पुग्नु अघि कतै केही खाएर जाँउहोला,’ पत्नीको सुझाव हुन्छ । मिसिसिपी राज्यको हेटिसबर्गबाट हामी अघि बढ्दैछौँ । अँध्यारो सुरु भैसकेको छ । म गुगलमा मोबिल सिटीमा इण्डियन रेस्टुँरा खोज्न थाल्छु ।
गुगलले पहिलो नम्बरमा हलाल कुजिन इण्डिया देखायो । दोस्रो नम्बरमा ‘याक दी काठमाण्डु किचेन’ देखायो । याक र काठमाण्डु दुई शव्दले म कन्फर्म भएँ कि यो कोही नेपालीकै रेस्टुँरा हो भनेर । नेभिगेसनमा रेस्टुँराकै ठेगाना हालेर हामी अघि बढ्यौँ ।
कोठा बुक गरेको होटल र रेस्टुँराको दुरी आधा माइलमात्र रहेछ । नौ बजेसम्ममात्र होटल खुल्ने रहेछ । नेभिगेसनले ८ः२० मा हामी त्यहाँ पुग्छौँ भनेर बताइरहेको छ ।
रातिको समय । मिसिसिपी कटेर अलाबामा टेकेपछि त कतिपय ठाउँमा ३५ माइल प्रतिघण्टाको स्पिड लिमिट । त्यसमाथि कतिपय ठाउँमा सिंगल लेनको हाइवे । नेभिगेसनलाई पछ्याउँदै हामी ८ः२५ मा रेस्टुराँ अघिल्तिर पुग्यौँ ।
रातो अक्षरमा याक र कालो याकको स्केच भएको साइनबोर्ड नजिकै पुगेपछि देखियो । टेक्सस छाडेको ११ घण्टापछि त्यो अनकण्टार शहरमा काठमाण्डु शव्द देख्दा निकै आत्मियता महसुस भयो ।
रेस्टुरेन्टको ढोका खोलेर भित्र पस्यौँ । नेपालको हिमालीभेगको कुनै होटल जस्तो लाग्यो । लुक्लाबाट नाम्चेबजार जाँदा बीचमा पर्ने होटलहरुमा जस्तो दृश्य देखिन्छ त्यस्तै महसुस भयो । ध्वजापताकाहरु थिए भित्तामा । थाङ्का पेन्टिङ, झल्लरहरु, हिमालका दृश्यका तस्बिरले नेपालकै हिमालीभेगको कुनै रेस्टुरामा भित्र भएको अनुभूति गरायो ।
रेस्टुरेन्टमा भित्र पसेर चारजनाको एउटा टेबुलमा गएर हामी बस्यौँ । शुक्रबारको साँझ रेस्टुरा व्यस्त होला भन्ने ठानेका थियौँ । तर भित्र एउटा टेबुलमा तीनजना गोरेहरुमात्र गफिदै खाइरहेका थिए ।
टेबुलमा बसेको १० मिनेटपछि बल्ल एकजना वेटर बहिनी आइपुगिन् मेनु लिएर । ‘हेलो, हाउ आर यु’ भन्दै उनले मेनु हामी चारैजनालाई बाँडिन् ।
‘बहिनी, हामी नेपाली हौँ । नेपालीमै बोल्दा हुन्छ,’ मैले भनेँ ।
‘ए, नेपाली हुनुहुँदो रहेछ,’ ती बहिनीले यत्ति भनिन् –‘के लिनुहुन्छ ड्रिङ्क्स ?’
हामीमध्य कसैले मनतातो पानी त कसैले सादा पानी अर्डर ग¥यौँ ।
नेपाली ग्राहकप्रति उनले खासै आत्मियता देखाए जस्तो लागेन । दिनभरिको कामले शायद थाकेर पनि हुनसक्छ । हुनतः संसारमा हरेक मानिसको एउटै स्वभाव हुँदैन । त्यसमाथि हामी जस्ता नेपाली ग्राहक कति जाँदा हुन् कति ? परिवार, जन्मेको हुर्केको ठाउँको परिवेशले मानिसको स्वभाव फरक पार्छ । ‘कहाँबाट आउनुभएको’ भनेर समेत सोध्ने फुर्सद थिएन उनीमा ।
‘हामी टेक्ससबाट आएको बहिनी । कति छन् यतातिर नेपाली ?’ मैले सोधेँ ।
‘खासै छैनन् यतातिर । अलिअलि छन् । टेक्ससमा त धेरै छन् है ?’ उनले भनिन् ।
अलाबामामा खासै नेपालीहरु भएको चर्चा सुनेको थिइन । थोरै विद्यार्थीहरु रहेको सुनेको थिएँ ।
मोबिल सिटी सामुद्रिक किनारको मध्यमखालको शहर हो । गल्फ अफ मेक्सिकोमा जोडिएको मोबिलमा बसेर यति राम्रो नेपाली पहिचान दिने रेस्टुरेन्ट चलाउने को होलान् ? मनमा जिज्ञासा पैदा भयो ।
१० मिनेटपछि वेटर बहिनी पानी लिएर आइन् । उनलाई सोधेँ–‘बहिनी यो रेस्टुरेन्टको साहु को हो नि ?’
‘सलामसिंह हो,’ उनले जवाफ दिइन् ।
‘सलामसिंह । थर चाँही के हो नि ?’ मैले सोधेँ ।
‘लामा हो ।’ वेटर बहिनीको जवाफ ।
‘नेपालमा कहाँ हो नि उहाँको ?’
‘काठमाडौंनै हो,’ उनले भनिन् ।
हाम्रो अर्डर लिएर उनी गइन् । म फेसबुकमा सलामसिंह लामा खोज्न थालेँ । धेरै सलामसिंहहरु फेसबुकमा फेला परे । तर मैले मोबिल बस्ने, याक रेस्टुँरासँग संबन्धितलाई लिएर सर्टआउट गर्न थालेँ । त्यसो गर्दा उनलाई भेटियो । तुरुन्तै फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएँ ।
खाना खाइसक्दा उनले फ्रेण्ड रिक्वेस्ट एसेप्ट गरेको नोटिफिकेसन देखियो । तत्काल उनले मेसेज पठाए–‘मेरो सानो रेस्टुँरा छ मोबिलमा । तपाइ मिसिसिपीमा हुनुहुँदो रहेछ । बाटो परेको खण्डमा पस्नुहोला ।’
केही घण्टा अघि मैले मिसिसिपी नदी किनारबाट फेसबुकमा अपलोड गरेको फोटाहरु उनले देखेछन् । उनले त्यही देखेर म मिसिसिपीमा भएको अनुमान लगाएको हुनुपर्छ ।
मैले तुरुन्त जवाफ दिएँ–‘म तपाइकै रेस्टुरामा छु ।’
‘साँच्चै ?’ उनले सोधे ।
उनी भित्र किचनमा रहेछन् । तत्काल बाहिर निस्किए । ग्राहकको रुपमा हामी र अर्को एउटा टेबुल भएकोले नेपाली अनुहार पहिल्याउन उनलाई कुनै गाह्रो थिएन । उनी सरासर हामी भएको टेबुलमा आइपुगे ।
काभ्रेका सलामसिंह लामा अध्ययनको लागि अमेरिका आएका रहेछन् । अध्ययन समाप्तीसँगै कम्पनीमा काम गर्दै उनले साइड बिजनेसका रुपमा यो रेस्टुरा गरेका रहेछन् ।
‘नुवाकोट त मेरो ससुराली हो नि । रातमाटे मेरो ससुराली हो । आज मेरै घरमा गएर बसौँ,’ उनले प्रस्ताव राखे ।
हामीले होटल बुक गरिसकेको बतायौँ ।
औँलामा गन्न सकिने नेपालीहरुमात्र भएको ठाउँमा हामीलाई भेट्दा उनी खुशी देखिए । हाम्रो भेट गुगलले गराइदिएको थियो । शायद गुगलमा सर्च नगरेको भए हामीले त्यस साँझ म्याकडोनाल्ड या सब–वेको कुनै फास्टफुड खाएर पेट भर्नेथियौँ । गुगलमा सर्च गर्दा याक रेस्टुराँ फेला परेकोले हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ ।
सन् २०१२ देखि उनले यो रेस्टुरा सुरु गरेका रहेछन् । अर्को पनि रेस्टुरा रहेछ उनको । ग्याँस स्टेशन पनि रहेछ । सुरुवातका दिनमा गर्नुपरेको संघर्षदेखि लिएर नेपाल चिनाउन गरेका कामहरुका बारेमा उनले केही कुराहरु बताए ।
‘यहाँका धेरै मानिसलाई नेपालका बारेमा थाहै थिएन । मेरो यो रेस्टुँरा खुलेपछि धेरैले नेपाल बारे बुझेका छन् । कति त नेपाल गएर पनि घुमेर आइसके ।’ उनले भने ।
उनको रेस्टुराभित्र भएको सजावट, बिक्रीका लागि राखिएका क्युरियो जस्ता सामानले नेपाललाई चिनाउन साँच्चिकै योगदान गरेको देखिन्थ्यो ।
पुरै ११ घण्टाको ड्राइभिङ छोरा आरोग्यले गरेको थियो । हामी थकित पनि थियौैँ । हामीले एक आपसमा फोन नम्बर साटासाट ग¥यौँ । पछि फर्किदा भेट्ने भन्दै हामी रेस्टुराँको बिल तिरेर त्यहाँबाट निस्कियौँ ।
फ्लोरिडाबाट फर्किदा डिसेम्बर २९ मा पनि हामी मोबिलकै होटलमा बास बस्यौँ । साँझ याक रेस्टुरामै गएर डिनर लियौँ । तर सलामसिंहलाई भेटेनौ । उनका बारेमा सोधिखोजी पनि गरेनौँ । भुलेर होइन नियतवशनै हामीले उनलाई सोधेनौ त्यस साँझ ।
किन सोधी गरेनौ भने भने यदी उनी त्यहाँ भएका भए हामीलाई उनको घरमा जान अति कर गर्नेथिए । उनले अति कर गर्ने संकेत बुझेर नै मैले उनलाई थाहै नदिने विचारले उनको रेस्टुरामा पुगेर छिटोछिटो खाना खाएर निस्कियौँ ।
घुमफिरमा निस्कँदा मेरी पत्नीले एउटा मापदण्ड बनाएकी छिन् । त्यो हो–‘अति घनिष्ठ साथी र आफन्तभन्दा बाहेक सामान्य चिनजान भएकालाई दुःख दिनु उचित हुँदैन । यात्रामा त्यसो गरियो भने रमाइलो हुँदैन, तनावमात्र हुन्छ ।’ यही मापदण्डलाई पछ्याउँदै हामीले सलामसिंहसँग भेट हुन नपाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखेका थियौँ र संयोगले भयो पनि त्यस्तै ।
अमेरिकामा नेपालीहरु नपुगेका शहरहरु अब ज्यादै थोरैमात्र होलान् । नेपालीहरु न्यूयोर्क, ड्यालस, लसएन्जलस, सानफ्रान्सिस्को, डेनभर, हुस्टन, अस्टिन, वासिङटन डिसी, बाल्टिमोर, बोस्टन, सिकागो लगायतका शहरहरुमा भेटिनु अनौठो हुँदै होइन । तर अनकन्टार लाग्ने मोबिलमा भेटिनु र त्यो पनि एकजना व्यबसायी । यसले हाम्रो यात्रा अविस्मरणीय र रोमाञ्चक बनाउन मद्धतनै ग¥यो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वसम्मत गराउने प्रयास जारी
२०७५ पुष १८, बुधवार ०५:५७
काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ...
मिस नेपाल खतिवडा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सदभावना दूत नियुक्त
२०७५ पुष १८, बुधवार १०:१६